I-3phase induction motor yezentengiso izinhlobo zomkhiqizi wentengo ye-ac motor
3phase induction ac motor moetsi iyathengiswa
3 isigaba sokungenisa okuthengiswayo
I-motor 3 phase induction motor esetshenziswa kakhulu motor, 3 isigaba squirrel cage induction motor.
Zonke izinhlobo zama-motor phase induction motor, i-teco 3 phase induction motor
Thola lapha izinga eliphakeme kakhulu lesigaba 3 sokufakwa kukagesi kwesigaba
Izigaba ezintathu ze-AC zinemithombo emithathu yamandla we-AC, wonke aphume esigabeni. Izigaba ezintathu ze-Squirrel cage induction motors zihlukaniswa ngezinhlobo ezi-6 ezijwayelekile.Ukulawulwa okusheshayo kwesigaba sokungeniswa kwesigaba se-3 ngemvamisa ye-stator. I-hindi, ijika ngamandla kazibuthe ku-3 phase induction motor, 3 phase asynchronous motor, 3 phase 4 pole motor, 3 phase induction motor ethengiswayo.
Sinikeza imikhiqizo engu-158 teko 3 yesigaba sokungenisa izimoto.
I-motor induction ijikeleza ngenxa kazibuthe ojikelezayo ku-3 phase induction motor, i-4 pole motor 3 phase, ukwenziwa kwesigaba esilula sokulawula isivinini se-motor phase 3.
Uhlobo Lwezimoto Eziyizinhlobo Ezintathu
Izimoto ezintathu zokufaka indandatho yesigaba esithathu zingasetshenziselwa izintambo zezimboni lapho ijubane lokuguquguquka kanye ne-torque ephezulu kuyizidingo eziphambili.I-3 phase squirrel cage induction motor uhlobo lohlobo lwezimoto ezintathu lokungenisa.
Izinhlobo zezimoto ezi-3 zokungeniswa kwesigaba
3 isigaba squirrel cage induction motor
Kunezinhlobo ezimbili zezimoto ezi-3 isigaba squirrel cage induction motor ezisuselwa kuhlobo lokwakhiwa kwe-Rotor.Speed ​​control of 3-phase induction motor using rotor impedance.Three phase slip ring induction motor ingasetshenziselwa izintambo zezimboni lapho isivinini esiguqukayo kanye nokuqala okukhulu. ithoshi yizidingo eziphambili.types ezintathu zokungeniswa kwesigaba motor esizihlinzekela i-squirrel Cage Induction Motor. I-Slip Ring Induction Motor noma i-Wound Rotor Induction Motor noma i-Phase Wound Induction Motor. I-50 Hz noma i-60 Hz cage induction motors, futhi insimu kagesi, i-Aggregate, Cement, Chemical, Amafutha, Ukudla kwegesi kanye nosimende njll.
Insiza Yokuthengisa Nezokulungisa Yezimboni: Motors, amaphampu, amabhokisi egiya, ama-inverters, kanye nezinsimbi. Uma unemibuzo, ungaxhumana nathi, sizokujabulela ukukusiza! Iqembu lethu elinamakhono amakhulu kukusiza ukuthi ugweme isikhathi sokuphumula futhi ubuye usebenze ukuze uhlale ukhathazekile. Sishayele namuhla! Sithatha ikhwalithi njengenzuzo futhi intengo ephansi ngobuqotho. Iqembu lethu elinamakhono amakhulu kukusiza ukuthi ugweme isikhathi sokuphumula futhi ubuye usebenze ukuze uhlale ukhathazekile. Sishayele namuhla!